विमानस्थलबाट कुन महिनामा कति समातियो ? - Everest Dainik - News from Nepal
विमानस्थलबाट कुन महिनामा कति समातियो ?
काठमाडौं, असार ३ । विमानस्थलका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र भन्सार कर्मचारीको सुन तस्करीमा संलग्नता रहने गरेको देखिएपछि तस्करले विमानस्थलका प्राविधिक त्रुटिलाई उपयोग गर्न थालेका छन् ।
गत साता विमानस्थल कार्गोबाट पास भएको गाडीमा प्रयोग हुने मास्टर सिलिन्डरभित्र सुन लुकाएर ल्याइएको भेटिएको थियो । कार्गोमा आउने सामानको स्क्रिनिङ नहुने भएकाले त्यस्ता सामानमा फिट गरेर सुन तस्करी हुन थालेको छ ।
याे पनि पढ्नुस सुन तस्करीको खोजी भइरहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको दाबी
इमर्जेन्सी लाइट, आइरन, फ्यानको ब्याट्रीलगायतमा सुन फिट गर्ने गरिएको यसअघि पक्राउ परेका घटनामा देखिन्छ ।’विदेशमै यसरी सुन फिट गर्ने र गर्न लगाउने समूह सक्रिय देखिन्छ । ०७३ साउनदेखि ०७४ जेठसम्म विमानस्थल प्रहरी र भन्सार कर्मचारीले समातेको अवैध सुन (प्रतिमहिना) । यसमा सीआईबीले समातेको ३३ केजी सुन भने समावेश छैन ।
याे पनि पढ्नुस एसएसपीको रेट एक लाख !
कुन महिनामा कति समातियो ?
याे पनि पढ्नुस सुन तस्करीमा साँठगाँठ नेपाल प्रहरीपछि सशस्त्रसँग !